Manni maree naannoo Amaaraa marsaa shanaffaa waggoota hojii 4ffaa fi gumii isaa 12ffaa kaleessa jalqabee jira.
Gumiin sun kaleessa cufataan mari’ataa kan ture yoo ta’u gara galgalaa itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo obbo Assemmaaheny Asres ibsa kennaniiru.
Gumiin sun turtii isaa kaleessaan haala nageenya naannoo sanaa ilaalchisee gabaasa isaaf dhiyaate dhaggeeffatee erga gamaaggamee booda murtii cimaa dabarsuu isaa itti gaafatamaan waajjirchaa dubbataniiru.
Keessumaa yeroo ammaa uummata Amaaraa fi Tigraay gidduu kan ture hariiroo gaarii hammeessuu dhaan waraana fi tuttuqqaa raawwataa kanneen jiran hoogganni naannoo Tigraay gocha isaanii irraa akka of qusatan manni maree sun yaadachiiseera jedhan.
Waajjirri kominikeeshinii mootummaa naannoo Tirgaay gama isaan manni maree Amaaraa ibsa kenneen uummati Tigraayii fi mootummaan naannoo waraana geggeessaa jiranii fi dadammaqiinsa gochaa jiran irraa akka of qusatu kan jedhu ergaa akeekkachiisa qabu raabseera jedha ibsi kun.
Ibsichi akka jedhutti haa ta’u malee uummati Tigraayii fi mootummaan isaa balaa waraanni fidu waan hubatanii fi ajendaan isaanii ijoon nagaa buusuu, dimokraasii babal’isuu fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuu akkasumas gama maraan martinuu kan irraa fayyadamu misoomaa saffisuuf hojjetaa jira.
UUummati Tigraay mootummaa dargii kan waggoota 17 kuffisuu keessatti obboleessa kan ta’e uummati Amaaraa cina isaa hiriiruu dhaan wareegama kaffaleera. Kanaaf uummatii fi mootummaan naannoo Tigraay kaayyoo uummataa qabsaa’niif qabatanii fuula duratti tarkaanfachuu malee obboleessa kan ta’e uummata Amaaraa irratti sababaa huuruu qawwee gargalchuuf tokko illee hin qabu jedha ibsu kun.
Hoogganni Tigraay Waraana Tuqachuu Haa Dhaau: M.N Amaaraa